Gbalịa 'Proton' ugbu a na Firefox na ụdị desktọọpụ ya | Gam akporosis
Nke a bụ otu 'Proton' redesign maka Firefox ga-esi melite njirimara onye ọrụ
Ọ bụ ezie na anyị raara onwe anyị nye 90% maka gam akporo, ọ bụ eziokwu na ụlọ ọrụ dịka Mozilla na-elebara anya anyị niile maka ịbụ otu n'ime ndị na - eme nchọgharị na mkpanaka na Firefox ha. Ugbu a na-eweta nzaghachị 'Proton' (nke ahụ bụ koodu aha dị n'ime) na Firefox, ma maka desktọọpụ.
A na-atụ anya na site n’etiti ọnwa Mee anyị nwere ike ịnụ ụtọ na tebụl anyị nke interface ọhụrụ nke ga-eme ka ahụmịhe onye ọrụ nke otu ihe nchọgharị kachasị mma anyị nwere maka PC anyị.Mosilla wepụtara oge iji kọwaa ụfọdụ omume ọma na uru ya, yabụ anyị ga-enye gị uto.
2 Nchịkọta burger dị mfe
3 Gbalịa melite ugbu a ma ọ bụrụ na ịchọrọ
Na koodu aha ya bu 'Proton', Mozilla egosiputara ufodu nzuzo nke a ka anyị kwuo asụsụ nhazi ọhụụ onye chọrọ ịkwalite ahụmịhe ahụ kwuru na Firefox maka desktọọpụ. Site na Techdowns anyị nwere mockups ndị ahụ na-ekpughe ụfọdụ mgbanwe ndị pụtara ìhè anyị nwere ike iji na ụdị nke 90 nke ihe nchọgharị weebụ na-ewu ewu.
N'ime ihe ndị a tụrụ anya ka Proton nweta nkwalite ma ọ bụ gbanwee kpamkpam, anyị nwere ike ịkọwa ogwe adreesị, ogwe aka, ogwe taabụ, menu hamburger, ogwe ozi na bọtịnụ ndị ọzọ. N'ime ndị ahụ na-akwa emo anyị nwere ike ịchọta etu Mozilla ga-esi melite akụkụ ọhụụ nke ibe taabụ ọhụụ mepere emepe.
Ee nke ahụ na anyị pịa + wee mepee ọhụrụ ka ịmalite iji ubi igodo na URL. Ma ọ bụ na anyị nwere ike iji isiokwu omenala, ndabere, na taịlị arụ ọrụ maka ntinye aka na saịtị Top.
Nchịkọta burger dị mfe
Amaghị m ma ọ bụrụ na ọ ga - eme gị, mana ọbụlagodi na Chrome, oge ọ bụla anyị pịrị na menu hamburger dị na akuku aka nri elu, dịka ọ dị na Firefox, a na - emepụta nhọrọ dị iche iche na mgbe ụfọdụ ọ na - esiri ike nghọta gịnị dị; ọ bụrụ na anyị etinyegoro nke ahụ site n'oge ruo n'oge anyị pịa na menu ahụ, ọ bụrụhaala na o doghị anya ma mata ihe ndị mejupụtara ya, ọ fọrọ nke nta ka anyị bido ime iji gụọ ya.
Nke a bụ otu nnukwu mgbanwe na 'Proton' maka Firefox, ugbua nke ahụ ga-eme ka ibu arọ nke nhọrọ belata. Ma ọ bụ na ugbu a mgbe anyị meghere anyị nwere ike ịmepụta 20 nhọrọ dị iche iche dịka ịgbanwe mbugharị imepe taabụ ọhụrụ. Malite na ụdị nke Firefox 90, menu a ga-egosi naanị ntọala ma ọ bụ ihe ndị ahụ ị na-ejikarị.
Ọ bụrụ na n'agbanyeghị ebumnuche ọ bụla anyị anaghị achọta ọnọdụ a chọrọ, anyị nwere ike ịkwatu menu iji chọta ya ozugbo.
Gbalịa melite ugbu a ma ọ bụrụ na ịchọrọ
Obere ihe omuma ọ bụ ndị ahụ mechie nkuku nke nku anya nakwa na ọ dị nnọọ iche na nke ndị dị ugbu a na ndị ahụ kwụ ọtọ. Ma ọ bụrụ na ihe ọ bụla ị bụ, ị na-achọ ịmata ihe mmelite ọhụrụ ahụ ga-adị ka nke 90 nke Firefox, ị nwere ike ịnwale ya ugbu a.
Soro usoro ndị a iji nwalee mmelite 'Proton' ugbu a na ihe nchọgharị Firefox gị:
Na URL anyị tinye:
Anyị kwesịrị ugbu a chọọ "proton" ma gbanwee nhọrọ ka ọ bụrụ eziokwu site na nchọgharị.proton.enabled
Firefox ga - adọ gị aka na ntị na iji njirimara a nwere ike inwe mmetụta adịghị mma na arụmọrụ nchọgharị, mana anyị na-aga ebe ahụ.
una Mmelite na-abịa na Firefox n'ụdị 90 na etiti Mee maka desktọọpụ na ị nwere ike ịnwale ugbu a na kọmputa gị; mgbe anyi n'eche na gam akporo anyị nwere ike iwunye ndọtị ahụ n'ụzọ dị mfe.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Nke a bụ otu 'Proton' redesign maka Firefox ga-esi melite njirimara onye ọrụ
Gọzie Mobile bụ MMORPG ọhụrụ na ihe niile akpaka na ikpọ eserese
Google Lens na gam akporo nwere ike ịtụgharị ederede ugbu a na adịghị n'ịntanetị